ESI AGBA OKU VIDIYO NA DISK - ESI MEE - 2019
Esi agba oku vidiyo na disk
Mgbe ị na-ezipụ foto gaa na Instagram, ndị enyi anyị na ndị maara anyị, ndị nwekwara ike ịbụ ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta a, na-ewere na foto. Ya mere, gịnị ma ị gwa onye ahụ nọ na foto ahụ?
Ighata onye ọrụ na foto na-enye gị ohere itinye njikọ na foto nke ibe profaịlụ. N'ihi ya, ndị debanyere aha gị nwere ike ịhụ ndị na-egosi na foto ahụ, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, denye aha onye ahụ akara.
Anyị na-akara onye ọrụ na Instagram
Ị nwere ike ịche onye mmadụ na foto ma na usoro nke na-ebipụta foto, na mgbe foto dị na profaịlụ gị. Anyị na-adọrọ uche gị gaa n'eziokwu na ị nwere ike ịlele ndị mmadụ naanị na foto gị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ mmadụ n'onye ahụ, nke a nwere ike ime ugbu a na foto onye ọzọ.
Nzọụkwụ 1: mee ka onye ahụ mara na oge nke foto ahụ
Pịa na akara ngosi dị n'etiti na onyinyo nke ihe mgbagwoju anya ma ọ bụ igwefoto ịmalite ibipụta ihe oyiyi.
Họrọ ma ọ bụ mepụta foto, wee gaa n'ihu.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dezie onyinyo ahụ ma tinye ihe nzacha na ya. Pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Ị ga-aga na njedebe ikpeazụ nke mbipụta nke foto ahụ, nke ị nwere ike ịde akara ndị niile ahụ na foto a. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. "Ndị ọrụ ọrụ Mark".
A ga-egosi onyinyo gị na ihuenyo ebe ịchọrọ ịmetụ aka ebe ịchọrọ ịde akara onye ọrụ ahụ. Ozugbo i mere nke a, ị ga-achọ ịhọrọ akaụntụ, malite ịbanye nbanye nke onye ahụ. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na na foto a, ị nwere ike ịchecha onye ọ bụla, ọ dịghịkwa mkpa ma ànyere ya ma ọ bụ.
Eche banyere onye ọrụ ahụ na-egosi na onyinyo ahụ. Ụzọ a ị nwere ike itinye ndị ọzọ. Mgbe emechara, pịa bọtịnụ ahụ. "Emere".
Mezue akwụkwọ nke foto site na ịpị bọtịnụ ahụ. Kwuo.
Mgbe ịchọrọ mmadụ, ọ ga-enweta ọkwa banyere ya. Ọ bụrụ na ọ na-achọpụta na anaghị egosi ya na foto ma ọ bụ foto adịghị adabere na ya, ọ nwere ike ịjụ akara, mgbe nke ahụ gasịrị, njikọ ya na profaịlụ site na foto ga-apụ n'anya.
Nzọụkwụ 2: kpọọ onye ahụ na foto ahụ e bipụtara ugbu a
Ọ bụrụ na foto na onye ọrụ adịlarị n'ọbá akwụkwọ gị, i nwere ike idezi foto ahụ n'ụzọ dịtụ.
Iji mee nke a, mepee foto nke ga-arụ ọrụ ọzọ, wee pịa akara ngosi ahụ nwere akara atọ na n'akụkụ aka nri aka nri ma pịa bọtịnụ na nchịkọta nhọrọ ndị na-egosi. "Gbanwee".
N'ime foto ahụ na-egosi "Ndị ọrụ ọrụ Mark", nke ị ga-eji enweta.
Mgbe ahụ kpatụ ebe a na-ese onyinyo ahụ, wee họrọ ya site na listi ma ọ bụ chọta ya site nbanye. Zọpụta mgbanwe site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Emere".
Usoro 3: onye ọrụ a kpọtụrụ aha
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịkọ ndị mmadụ na ihe ahụ na foto ahụ ma ọ bụ nkọwa ya.
Iji mee nke a, ịdenye nkọwa ma ọ bụ ikwu na foto ahụ, gbakwunye aha njirimara nke onye ọrụ ahụ, echefula ịtinye akara ngosi "nkịta" n'ihu ya. Dịka ọmụmaatụ:
Mụ na enyi m @ lumpics123
Ọ bụrụ na ị pịa onye ahụ a kpọtụrụ aha, Instagram ga-emeghe ya profaịlụ.
O di nwute, na ngwa weebụ nke Instagram ọrụ enweghi ike akara. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwe Windows 8 ma dị elu ma chọọ icosi ndị enyi gị na kọmpụta gị, mgbe ahụ, ngwa Instagram dị maka gị na ụlọ ahịa Microsoft, nke usoro nke ịdebanye aha ndị ọrụ na-adaba na nsụgharị mobile maka usoro iOS arụmọrụ.